जंगली च्याउ के कारण हुन्छ विषालु ? चिकित्सकको यस्तो सल्लाह « Khabarhub
जंगली च्याउ के कारण हुन्छ विषालु ? चिकित्सकको यस्तो सल्लाह
काठमाडौं- मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई नचिनेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ । वर्षा शुरु भएसँगै जङ्गलमा च्याउ उम्रने र त्यही च्याउ तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दा विषाक्त भई कतिपयको ज्यानै जाने गर्दछ ।
च्याउ खाँदा के कारण ज्यान जान्छ ? वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी सबै च्याउ सामान्य नभएर विषालु हुने बताउँछन् ।
विशेषगरी वनको च्याउ बढी विषालु हुने र तिनमा विष देखिने गर्दछन् । त्यस्ता च्याउमा हरेक वर्ष हरेक समय फरक–फरक विष देखिने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।
च्याउको जात सामान्यतया झट्ट हेर्दा उस्तै–उस्तै हुने हुनाले कुन बढी विषालु हो र होइन भनेर मानिसलाई छुट्याउन कठिन हुने उनले बताए ।
जानकारीको अभावमा कुन च्याउ विषाक्त हो भनेर पहिचान गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ । अधिकारीले भने ‘यिनीहरुमा पहिलेनै तयारी विष हुन्छ, ती कीटाणु होइनन् ।’
विषालु च्याउ खाएर अस्पताल आउने बिरामीमा विषलाई सिधै कम (न्यूट्रलाइज) गर्ने पदार्थ नहुने हुनाले उनीहरुलाई सहयोग गरेर जुन अङ्गमा असर छ त्यसलाई औषधि प्रयोग गरी जोगाउनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
विष रोक्ने औषधि नहुने भएकाले त्यसले शरीरका कुन अङ्गलाई असर गरेको छ त्यही अङ्गको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारीले समाजमा यस्ता खालका च्याउहरु पखालेर, उमालेर खायो भने विष जान्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन सुझाव दिएका छन् ।
च्याउलाई उमाल्दैमा विष नजाने उनको भनाइ छ । पहिले हल्का–हल्का विष लाग्यो भने अरु केहीले होला भन्ने सोचेर पुनः च्याउ खाने प्रचलन रहेको भन्दै यस्तो गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
अधिकारीले एउटै ढुसीमा पछि पनि विष कडा खालको बन्ने गरेको बताए । वनको च्याउ नचिनी नखान र थाहा नपाई खाइहालेमा तत्काल अस्पताल पुग्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
च्याउ खाएको छ घण्टाभित्रमा अस्पताल आएमा ९० प्रतिशत बच्न सकिन्छ भने दुई दिनपछि आउँदा ४० प्रतिशतलाई मात्र बचाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालको ग्रामिण भागमा आर्थिक अभावका कारण दैनिक छाक टार्ने क्रममा पोषिलो खाना खोज्दै गर्दा च्याउलगायतका वनका कन्दमूल खान बाध्य हुने अवस्था रहेको छ ।
भुईंच्याउमा सबैभन्दा बढी बिष हुने भएकाले खानै नहुने चिकित्सकको सल्लाह छ । व्यवसायीक खेतीमार्फत उमारिएको च्याउ किनेर खाएमा त्यसले भने फाइदा गर्दछ ।
प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार ३ : ५५ बजे